100lọ oriri na nkwari kacha elu XNUMX dị na US aha ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » 100lọ oriri na nkwari kacha elu XNUMX dị na US aha ya
TYSONS CORNER, VA – Cvent, Inc, a cloud-based enterprise event management platform, today announces its annual list of the top meeting hotels in the United States.
TYSONS CORNER, VA - Cvent, Inc, usoro nhazi ihe omume nke igwe ojii, na-ekwupụta ọkwa kwa afọ nke ụlọ nzukọ nzukọ kacha elu na United States. Cvent na-arụ otu n'ime ọmarịcha ahịa ụwa zuru ụwa ọnụ maka azụmaahịa nzukọ nzukọ otu na Cvent Supplier Network (CSN). Cvent na-eme atụmatụ na $ 10 Ijeri uru nke azụmahịa otu ga-aga site na ya na netwọk na 2015.
Idu ndepụta nke Top 100 US Hotels Hotels bụ ihe ndị a sitere na ọnọdụ gafee mba ahụ:
1. ARIA Resort & cha cha - Las Vegas, NV
2. Gaylord Opryland Resort & Ebe Mgbakọ - Nashville, TN
3. Ndị Venice na Palazzo Resort, Hotellọ nkwari akụ & Casinos - Las Vegas, NV
4. Omni Nashville nkwari akụ - Nashville, TN
5. Obodo Hyatt Chicago - Chicago, IL
6. Hilton San Diego Bayfront - San Diego, CA
7. Gaylord Texan Resort & Mgbakọ Mgbakọ - Grapevine, TX
8. Hilton Anatole - Dallas, TX
9. Fontainebleau Miami Beach - Miami, FL
10. Obodo Cosmopolitan nke Las Vegas, Autograph Collection® - Las Vegas, NV
"Elslọ oriri na ọ Hotụ Hotụ na-asọ mpi maka azụmahịa otu, nke nwere ike ịbụ akụkụ dị ukwuu nke ngwakọta ego ha na-enweta na uru karịa njem ntụrụndụ ma ọ bụ njem azụmahịa na-adịghị agafe agafe," ka Bharet Malhotra, onye isi osote onye isi oche nke ahịa maka Cvent Supplier Network kwuru. “Ndepụta nke afọ a nwere ọtụtụ mgbanwe n'akụkụ 100 kacha elu, gụnyere ụlọ ọrụ ọhụrụ 18 kụrụ aka na ndepụta nke afọ gara aga. Lọ oriri na ọ Hotụ areụ na-etinye ego mgbe niile iji kwalite nzukọ na oghere ime ụlọ yana ikike ha nwere maka ịkwado nzukọ na ihe omume. ”
Malhotra kwukwara, sị: “N’ịzụlite Network nke ndị na-eweta ngwaahịa, anyị mepụtara ahịa siri ike nke na-eje ozi dị ka olulu na-ebugharị azụmaahịa otu na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ma na-enyere ụlọ oriri na ọ withụ withụ aka na usoro mbụ dị oke mkpa nke mmeri otu azụmahịa: ịmepụta visibiliti n’etiti nnukwu mmadụ nke ndị nhazi ihe omume. ”
Cvent tụlere ụlọ nkwari akụ nke wepụtara azụmaahịa site na Cvent Supplier Network site na Septemba 2013 rue August 2014. Edebere ihe ndị ahụ na njirisi dị iche iche, gụnyere ngụkọta arịrịọ maka atụmatụ (RFPs), nyere RFPs, ọnụ ụlọ zuru ezu, inye ụlọ abalị, isi obodo mepere emepe. (MMA) òkè ahịa, ọnụego mgbanwe, na nleta profaịlụ pụrụ iche nke ụlọ nkwari akụ ahụ na Cvent Supplier Network. Iji ruo eru maka nsonye, ​​ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ aghaghị inwe ihe karịrị 50,000 square ụkwụ nke mkpokọta nzukọ na ihe karịrị 10 ma ọ bụ karịa ụlọ nzukọ. Emere njirisi a iji nye echiche kacha mma gbasara ụlọ nzukọ kacha elu na US
Lee ndepụta ndepụta nke Top 100 US Hotels Hotels ebe a: http://www.cvent.com/rfp/2014-top-100-us-meeting-hotels-f002743686ec45749cf28b9ae19ec3df.aspx